Faahfaahin Dheeraad Ah Oo Laga Helay Heshiiska Ay Real Madrid Ku Doonayso Mucjisada Reer Masar Ee Mohamed Salah – GOOL24.NET
Faahfaahin Dheeraad Ah Oo Laga Helay Heshiiska Ay Real Madrid Ku Doonayso Mucjisada Reer Masar Ee Mohamed Salah
May 17, 2018 Cabdi Yare
Warbaahinta dalka Spain ayaa waxay shaaca ka qaaday in heshiiska la filayo in xiddiga reer Masar iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah uu ku Real Madrid uu ku dhow yahay in qalinka loo qaato oo ay labada naadi iyo ciyaartoyguba kala saxeexdaan.
Wargeyska “Diario Gol” ee dalka Spain kasoo baxa ayaa wuxuu sheegay in Real Madrid ay ku wargalisay Mohamed Salah in ay guri uga raadinayaan caasimada Madrid ee dalka Spain, si uu u dego marka uu yimaado garoonka Santiago Bernabeu marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee soo socda.
25 jirkan ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan adduunka xilli ciyaareedkan, isagoo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee England, wuxuu sidoo kale ku guuleystay laacibka bisha ee horyaalka Premier League 3 jeer xili ciyaareedkan 2017/2018, waana ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda ee sidaas sameeya.
Mohamed Salah ayaa wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta xidiga sanadka ee ee kooxda Liverpool, iyadoo sidoo kale ay intaas u sii dheertahay ku guuleysiga kabta dahabka ee gool dhalinta horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan kadib markii uu dhaliyay 32 gool.
Macalinka reer France iyo kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa lasoo warinayaa in uu madaxweynaha kooxda Florentino Perez uu tooshka ugu ifiyay in uu u dhaqaaqo soo gaba gabeynta saxeex heshiiska mucjisada xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah.
Si kastaba kooxda ka dhisan caasimada dalka Spain ee Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan kula ballansan finalka tartanka UEFA Champions League, Mohamed Salag iyo saaxiibadiisa Liverpool, kaasoo ka dhici doono 26-ka bishan May magaalada Kiev ee waddanka Ukraine.